अहिले प्रदेश नम्बर ३ को राजधानी जहाँ छ त्यो उपयुक्त स्थानमा छैन, हामी यसलाई उपत्यकाको आसपासमा सार्नेछौं « KhabarGhar – Nepal's No. 1 News Portal
प्रदेश नम्बर ३ का प्रदेश सासंदहरु अहिले अस्थायी राजधानी हेटौडामा प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली र कार्यविधि माथिको छलफल सकेर काठमाडौं फर्किएका छन् । उनीहरुले कार्यविधि र नियमावलीलाई संघीय संसदको भन्दा पनि जनप्रिय बनाउँदै बहुमतले पास गरेका छन् । संसदले यो कानुन निर्माण गरे स्थगत भएको संसद खुले लगत्तै प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामङ्कनमा बैठक प्रवेश हुने बैठक स्थल हेटौंबाट सांसद अरुण नेपालले बताएका छन् । यसै सेरोफेरोमा हेटौडामै रहेका सिन्धुपाल्चोकका सांसद अरुण नेपालसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीको संपादित अंश प्रस्तुत छ ।
० प्रदेश नं. ३ को प्रदेशसभा बैठकले अस्थायी राजधनी हेटौंडामा के निर्णय गर्योे ?
– भरखरै हामीले संसदको बैठक सकेका छौं । बैठकले प्रदेशसभाको कानुन निर्माण गरिएको छ । कार्यविधी र नियमावली २०७४ लाई बहुमतका साथ पास गरिएको छ । अब संसदको कानुन बन्यो । के र कसो गर्ने भन्ने कुरा कानुन अनुसार हुनेछ ।
० प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको विषयले संसदमा प्रवेश पाएन र ?
– हामी त्यो विषयमा प्रवेश गरेका छैनौं । संसदको नियमावली पास गरेपछि संसद केही दिनको लागि स्थगन भएको छ । यो स्थगनको अवधि सकिएपछि यो विषयले प्रवेश पाउँछ र हामीले निष्कर्ष निकाल्छौं ।
० स्थगत कहिलेसम्म हो ?
–यति नै भनेर किटान त गरिएको छैन तर पाँच-सात दिन पछि खुल्छ होला ।
० पारित गरिएको कानुन परम्परागत नै छ कि केही नयाँपन छ ?
– भरखरै पारित भएको हाम्रो प्रदेशको कानुनमा कुनै त्यस्तो एजेण्डामाथि छलफल गर्नुपर्योे र निचोड निकाल्नु पर्योे भनेर यदि १०० जना प्रदेशभित्रका नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकले त्यस्तो महशुस गरे भने उनीहरुले नै त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउन सक्छन् । जसमा एकसय जनाले हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्छ र ३ जना सांसदले त्यसलाई समर्थन गनुपर्छ । त्यस्तो हो भने जनस्तरबाट उठेको एजेण्डा पनि संसदमा प्रवेश गर्दछ र छलफल हुन्छ । एउटा नयाँपन हामीले यसलाई दिएका छौं । यस्तो व्यवस्था अहिले संघीय संसदमा पनि भएको छैन । अरु पनि कतिपय नयाँ कुराहरु छन् ।
० सर्वाधिक चासोको विषय भनेको राजधानी र नामांकनको विषय भएको छ, यसमा चाहिं तपाईहरु किन प्रवेश नगर्नुभएको त ?
– यसलाई कार्यविधी नै बनाएर केही गरिरहनु पर्ने विषय होइन । संविधनमा नै प्रदेशको २ तिहाई सदस्यले प्रदेशको नामाकरण गर्न सक्छन्। दुई तिहाई सदस्यको समर्थन, या भोटिङको आधारमा राजधानी र नामांकन तय गर्न सकिने व्यवस्था छ । यो संविधानमा नै उल्लेख गरिएको हुनाले त्यसका बारेमा हामीले कार्यविधिमा केही उल्लेख गर्न आवश्यक भएन । संविधानअनुसार नै हुन्छ । अहिले प्रदेशसभामा राजधानी र नामाकरणको बारेमा प्रस्ताव प्रस्तुत भइसकेको छैन । हामी एकदुई ओटा बैठकपछि यो प्रस्ताव संसदमा लैजानेछौं र त्यहाँ छलफल गरेर उपयुक्त ढंगले एउटा निष्कर्ष निकालिनेछ ।
० यस विषयमा संसदमा प्रवेश गराउन ढिला भएन त छलफलका लागि ?
– हैन ढिला भएको छैन । बल्ल अब समय शुरु हुँदैछ ।
० संभावित राजधानीको विषयमा चाहिं तपाइको धारणा के हो त ?
–म जनप्रतिनिधि हो । यस हिसाबले जनतालाई जे गर्दा सजिलो पर्दछ, त्यो नै मेरो पनि धारणा हुनेछ । हामी संघीयतामा किन गएको भन्दा राज्य र जनताबीचको जुन दुरी छ त्यसलाई घटाउनु पर्छ भनेर हो । जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन् भने जनता राज्यको आँगनमा जाने होइन कि राज्य जनताको आँगनमा जानुपर्छ भनेर हामीले संघीयताको व्यवस्था गरेको हो । अब राजधानी लगायतका अन्य धेरै कुराहरुमा जनतालाई जे गर्दा सुविधा पुग्छ तदनुकुलको हामीले निष्कर्ष निकाल्छौं । ३ नम्बर प्रदेशको अहिलेको राजधानी जहाँ राखिएको छ । यसबारेमा कहीं त्यस्तो छलफल पनि गरिएन । विगतको सरकारले निरंकुश ढंगले निर्णय ग¥यो । हाम्रो प्रदेश एकातिर तिब्बतसँग र अर्कोतिर भारतसँग जोडिएको छ । अब यस्तो खालको प्रदेशको जुन चरित्र र भौगोलिक बनावट छ, यसलाई ध्यानमा राख्दै उपयुक्त स्थानमा प्रदेशको राजधानी हुनुपर्छ । अहिले जहाँ प्रदेशको राजधानी बनाइएको छ त्यो व्यवहारिक छैन ।
० उपयुक्त स्थानचाहिं कहाँ हुनसक्ला ?
–उपत्यकाभित्र अहिले ललितपुर, भक्तपुरको चर्चा चलिरहेको छ । उपत्याभन्दा अलि बाहिर जाने हो भने बनेपाको चर्चा चलेको छ । यस्ता स्थानहरु हामीले खोज्नु पर्छ जहाँ सेण्टर परोस र सबैतिरका जनतालाई सुविधा होस । चितौन, हेटौंडा, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक सबैतिरका जनतालाई सुविधा होस । सबैलाई सेवा सुविधा दिनसक्ने हिसाबले हामीले स्थान तय गर्नुपर्छ । त्यो स्थान चाहिं उपत्याका वा उपत्यकाका छेउछाउका ठाउँहरु मात्रै हुनसक्छन् ।
० त्यसो भए हेटौंडा चाहिं हुँदैन भन्नखोज्नु भएको हो र ?
– मैले एक्लै त यसरी बोल्नु सायद राम्रो होइन । जसरी अनौपचारिक ढंगले सांसद साथीहरुसँग कुरा गरेको छु । जनतासँग, वौद्धिक समुदायसँग कुराकानी गरेको छु । व्यवासायीहरुसँग कुरा गरेको छु । कर्मचारी र मिडियाका साथीहरुसँग कुराकानी गरेको छु । सबैसँग कुरा गर्दा अहिले जहाँ राजधानी तय गरेका छौं त्यो सेण्टर परेको छैन भन्ने मैले पाएको छु ।
० व्यक्तिगत रुमा छनौट गनुपर्दा चाहिं कुन ठाउँलाई प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ ?
–मैले ठ्याक्कै एउटा मात्रै ठाउँ भनेर भन्दिनँ । नीतिगत हिसाबले मैले अघि पनि भनें कि हामीले जनतालाई सुविधा हुने स्थान चयन गर्नुपर्छ । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार पनि चाहियो । मन्त्रालय, संसद चलाउनु प¥यो । अन्य सरकारी कामकाज चलाउन हामीलाई धेरै स्टक्चर चाहिन्छ । दिर्घकालिन हिसाबले राम्रो बस्ति बस्ने, पानीको व्यवस्था भएको, सडकको व्यवस्था भएको, बस्ती विकास भएको हुनुप¥यो । यी पक्षलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । यसो गर्दा अहिले तत्कालनको निमित्त हामीले दुई स्थान देखेका छौं । एउटा भक्तपुर देखिएको छ । अर्को ललितपुर देखिएको छ । त्यसैगरी अर्को काभ्रेको खासगरी बनेपा र धुलिखेल देखिएको छ ।
० पार्टीको कुनै त्यस्तो निर्देशन हुन्छ कि तपाईहरुलाई ?
– त्यस्तो हुँदैन । यो कुनै राजनीतिक विषय होइन । यो भनेको सुविधासँग सम्बन्धित विषय हो । त्यसो भएकोले पार्टीको यहाँ हुनुपर्छ र यहाँ चाहिं हुनै हुँदैन भन्ने हुँदैन । यसमा विवेक प्रयोग गरेर जनताको चाहना र इच्छालाई ध्यानमा राखेर निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ । पार्टीले यसमा चाहिं कुनै ह्वीप जारी गर्दैन । मैले भनेको ३ वटा सम्भावित ठाउँहरुमध्ये एक स्थानमा हामीले व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
० सिन्धुपाल्चोक त हैन होला नी ?
–अहिले हामीले तत्कालै त्यस्तो सम्भावना देखेको छैन । सिन्धुपाल्चोक मात्रै होइन हामीसँग १३ वटा जिल्लाहरु छन् । यसमा हामीले भौतिक पूर्वाधार, बाटोको अवस्था के छ ? हेर्नुप¥यो । अहिले हामीले तत्कालै राजधानी बनाएर चलाउन सक्छौं कि सक्दैनौं ? सबै क्षलाई हेर्नुपर्छ किनभने भोलि त प्रदेशभरका सबै मानिसहरु आउँछन् । त्यो सम्भव हुन्छ कि हुन्न त ? मेरो जिल्ला, मेरो नगर, मेरा गाउँ भन्दा पनि जनतालाई केन्द्रभागमा राखेर उपयुक्त कुन ठाउँ हुनसक्छ ? त्यस्तो स्थानलाई छान्नुपर्छ । त्यसैले आफ्नो स्थानको नाम लिएर लाग्दा त्यो न्यायपूर्ण हुँदैन ।
The final word of the year selection team is made up https://essay4today.com/ of lexicographers and consultants to the dictionary team, and editorial, marketing, and publicity staff.